नेपाली ऊर्जा बजारमा बंगलादेशको इन्ट्री !
काठमाडौँ, साउन २५ । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन र बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिद शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदले नेपाल र बंगलादेशमा स्थायी सरकार रहेकाले दुवै देशबीचको ऊर्जा सहकार्यले मूर्तरुप लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारत हुँदै आफ्नो देशमा ऊर्जा भित्र्याउन भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने बताए ।
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले दुई देशबीच गठन हुने सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक नेपालमा हुने बताए । यसबारे औपचारिक प्रस्ताव कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत पठाइनेछ, उनले भने । मन्त्री पुनले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको लागि पनि छलफल अघि बढाइने बताए ।
उर्जा समाझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने बंगलादेश तेस्रो मुलुक हो । यसअघि भारत र चीनले पनि यस्तै उर्जा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौताहरु भइसकेको छ । विद्युतको उच्च माग भएपछि बंगलादेश पछिल्ला वर्षमा विद्युत् आपूर्तिको विकल्प खोज्दै छ । बंगलादेशले विद्युत् भित्र्याउन भुटानमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गरेको छ ।
नेपालमा आगामी केही वर्षभित्र उत्पादित विद्युत् बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले यसरी मिलाए पार्टीमा भागबण्डा
मुद्दा जिताउन सुशीलालाई लोकमानको १० करोड अफर !
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव किन अस्विकार गरे डा. केसीले ?
तुलसीपुर उपमहानगरपालिले असारे योजना रोक्दै
बैतडीमा जटिल प्रसूति सेवा बन्द